Ebe nrụọrụ mmekọrịta kachasị mma na-enye ọtụtụ nke nzuzo na nzuzo, n'etiti atụmatụ ndị ọzọ. Ederede a na-achọ ịtọ saịtị saịtị kachasị mma maka ọnọdụ onye ọ bụla na ebumnuche mmekọrịta ya.
Kachasị mma maka mmekọrịta siri ike - Eharmony
Kachasị mma maka ndị ọkachamara na - arụ ọrụ - EliteSingles
Free kacha mma mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị - Okcupid
Ezigbo saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị - AdultFriendFinder
Kasị ukwuu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ngwa - Tinder
Ezigbo mma mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị - SilverSingles
Personalitydị njirimara kachasị mma - Hinge
Kachasị mma maka ndị otu Kraịst - ChristianMingle
Ebe kachasị mma ịlụ nwoke na nwanyị - AshleyMadison
Ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị kacha mma maka ụmụ nwanyị - Bumble
Womenmụ nwanyị karịa ụmụ nwoke - Na- achọ
Ezigbo mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị maka n'okpuru 30 - Zoosk
Nyochaa onye ọrụ - Maka saịtị ọ bụla mkpakọrịta nwoke na nwaanyị anyị lere nyocha ụlọ ahịa ngwa, mkparịta ụka na mkparịta ụka, na nyocha na ntụkwasị obi iji chọta saịtị nwere ọkwa kacha elu na otu otu enyere.
Nzuzo na nchekwa - Onye ọ bụla anụla akụkọ jọgburu onwe ya banyere ụbọchị ịntanetị abanyela ma ọ bụ dị egwu. Ebe nrụọrụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị kachasị mma na-arụ ọrụ nzuzo ma ọbụnadị ndị na-eme nhazi oge ịbanye mgbe onye ọrụ na-enweghị usoro ma ọ bụ bụrụ ihe ize ndụ nye ndị ọzọ.
Njirimara pụrụ iche - websitesfọdụ ebe nrụọrụ weebụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-enye nhọrọ nnennen nhọrọ, ma ọ bụ site na nkata ma ọ bụ oku vidiyo. Ndị ọzọ na-enyere ndị mmadụ aka ịchọta egwuregwu ha na egwuregwu ndakọrịta, nhọrọ nzacha, na ndị ọzọ. Njirimara ndị a na-egosi ohere ka mma na ịga nke ọma.
1. Mmekọrịta - Kachasị mma maka mmekọrịta siri ike
Ọtụtụ nde di na nwunye ejikọtara site na Eharmony-n'eziokwu, ndị ọrụ 400+ lụrụ onye ha zutere na weebụsaịtị kwa ụbọchị. Ikpo okwu a enwetala mmeri dị ka ebe kachasị mma maka ịchọta mmekọrịta siri ike.
Eharmony na-achọ ndị ọrụ iji mezue ogologo oge nyocha banyere ntinye aka, nke na-arụ ọrụ dị ka "ndakọrịta usoro kwekọrọ." Saịtị ahụ na-eji ozi a iji chee ndị ọrụ nwere ike ịga nke ọma ịme nhọrọ mkpakọrịta.
2. Elite Singles - Kachasị mma maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ
Ndị otu Elite Singles tozuru oke, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-achọ mkparịta ụka na-akpali akpali. Ihe dị ka pasent 85 nke ndị sonyere nwere ogo mmụta dị elu, na pasent 90 karịrị 30 afọ. Ọnụ ọgụgụ ndị a na-eme ka ahụmịhe ndụ dị na njikọ mkpakọrịta nwoke na nwanyị.
Saịtị ahụ jikọtara ndị ọrụ na ndị otu ndị ọzọ site na iji algorithm gbadoro anya na nzaghachi ha na ajụjụ. Ndị mmadụ na-ejikarị ya eme ihe maka ịchọ mmekọrịta ogologo oge, ma n'ụlọ ma ndị si mba ọzọ. Ọ na-arụ ọrụ ugbu a na mba 25.
3. AdultFriendFinder - Kachasị mma maka nko
Ebughi saịtị a ka onye ọ bụla na-achọ mmekọrịta ogologo oge. Ọ na-enye abụọ bụ isi nhọrọ: flirting (na ngwa) ma ọ bụ hooking elu. Nke ahụ bụ ya, na maka ụfọdụ ndị, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ha chọrọ.
Debanye aha na ngwa a dị mfe. N'adịghị ka saịtị ndị ọzọ na-eme mkpakọrịta nwoke na nwanyị chọrọ ajụjụ, AFF na-edebe ya na usoro ntinye nke 30-nke abụọ. Ndị ọrụ nwere ike ịmalite nyocha ozugbo.
4. SilverSingles - Kachasị mma maka ndị otu nwoke karịa afọ 50
5. Bumble - Nnukwu nhọrọ maka ụmụ nwanyị
Bumble bụ ihe ọhụrụ n'etiti ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ihi na ọ na-enye ụmụ nwanyị ike ibido nkwukọrịta. Mụ nwoke enweghị ike ịkpọtụrụ asịrị nwanyị ha belụsọ ma nwanyị ahụ buru ụzọ kpọtụrụ. Nke a na-enye ụmụ nwanyị ohere iduzi otu ugboro.
Ikpo okwu na-elekwasị anya na kọntaktị ozugbo. Ndị ọrụ nwere awa 24 iji kpọtụrụ, mgbe nke ahụ gasịkwara, egwuregwu ahụ gwụrụ. Nke a na-egosi na saịtị ahụ na-elezi anya maka njikọta na-enweghị atụ, mana ọ dịkwa mma maka ndị na-anaghị achọ iji oge dị ukwuu na-agagharị.
Ngwa a jikọtara nke ọma na nyiwe ịkparịta ụka n'Spotntanet dịka Facebook, Spotify, na Instagram, na-enye ndị ọrụ ohere igosipụta akụkụ dị iche iche nke ụdị mmadụ ha. A na-enyocha akaụntụ iji nyere aka zere profaịlụ adịgboroja ịpụta ọtụtụ oge.
6. Mgbabere - Innovative mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ngwa
Companylọ ọrụ ahụ weghachiri Hinge na 2016, ọ bụkwa otu n'ime ngwa a na-ekwukarị gbasara ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'afọ ndị na-adịbeghị anya, o yikarịrị n'ihi ọnụọgụ ndị ọrụ ya. Ihe dị ka 75 pasent nke ndị ọrụ Hinge na-ahọrọ ịga ụbọchị nke abụọ mgbe ha zutere egwuregwu ha.
Ikpo okwu Hinge na-atọ ụtọ na ọ na-akpali ndị ọrụ ka ha nwee mmasị ma ọ bụ kwuo okwu na ụfọdụ ngalaba nke profaịlụ onye ọzọ. Ọ na - enye ndị mmadụ ụzọ ha ga - esi kparịta ụka karịrị nkata a na - ekwukarị.
8. Seechọ - Maka ndị na-a sugarụ shuga na ụmụ ọhụrụ shuga
Kingchọ pụrụ iche n'ihi na ọ na-elekwasị anya n'ịjikọ ndị na-eto eto (ụmụ ọhụrụ shuga) na ndị okenye, ndị nwere shuga bara ọgaranya. O doro anya, ọ bụ ihe nkịtị karịa ọtụtụ kwenyere, n'ihi na ikpo okwu ugbu a nwere ndị debanyere aha nde 10. Onye ọ bụla nwere ike ịkọwapụta okwu ya tupu ha jikọọ, ma ha chọrọ ịga njem, chọọ nkwụnye ego, ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ.
9. JDate - Naanị ndị Juu
JDate bụ ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị naanị maka ndị Juu na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye. E guzobere ya na 1997 ma enwere ike ịnweta ya na mba 100, na-enye ndị ọrụ ohere isoro ndị Juu na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye nwee nkwukọrịta n'asụsụ ise dị iche iche (Bekee, Hibru, French, German, na Spanish).
Ndị ọrụ nwere ike ịkpọtụrụ onye ọ bụla nwere ndị akwụghị ụgwọ ma ọ bụ akwụ ụgwọ. Ndị ahịa na-enyocha profaịlụ ọ bụla iji hụ na ọ bụ ezigbo ndị ahịa mepụtara ya.
10. ChristianMingle - Best Christian mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị
ChristianMingle na enyere ndi n’aru n’ime obodo Kraist aka ichota ihunanya ha rue mgbe ebighi ebi. Ọ na-etu ọnụ maka ndị ọrụ 1 nde, saịtị ahụ na-agba ume n'ụzọ doro anya "mkpakọrịta nwoke na nwanyị dabere n'okwukwe" maka ikike ogologo oge.
Enwere nhọrọ akaụntụ nweere onwe ma ọ bụ ndị otu ọnwa maka $ 29.95. Nke ikpeazụ na-abịa na nkwa, ebe onye ọrụ nwere ike ịnata ọnwa isii n'efu mgbe mbido ọnwa isii mbụ ha kwụsịrị ma ọ bụrụ na ha ahụghị ụfọdụ kwesịrị ekwesị.
11. Zoosk - Nnukwu mba ụwa
Zoosk obụrede mbụre otu n'ime ndị kasị ibu nyiwe na mba n'ọtụtụ na, na ihe karịrị 40 nde ndị òtù n'ụwa nile. Kwa ụbọchị, ndị ọrụ a na-ewebata ihe karịrị nde ozi atọ n'asụsụ 25. Zoosk na-arụ ọrụ n'ihe karịrị mba 80.
12. Reddit R4R - Kachasị mma maka ndị ọrụ Reddit
R4R, ma ọ bụ Redditor maka Redditor, bụ nke enyerela ọrụ iji jikọta ndị ọrụ. Ikpo okwu anaghị eji atụmatụ dabara adaba, kama, ọ bụ nnukwu ebe mgbasa ozi nkeonwe.
Nchọpụta ọchụchọ onye ọrụ na-eweta nsonaazụ kachasị amasị ha. Ndị ahịa Reddit na-eji ya achọta ihe omume, ndị enyi, nnọkọ oriri na ọ partiesụ ,ụ, mmekọrịta, yana mmekọrịta dị ogologo oge.
Agbanyeghị na ọ bụ nzukọ a kpọkọtara ọnụ, a ka nwere iwu metụtara afọ, nzuzo, iwu na omume. Dịka ọmụmaatụ, a na-anabata NSFW posts mana a ga-akpọrịrị ya ka ndị ọrụ wee nwee ike ikpebi ma ha ga-elele post ahụ ma ọ bụ.
13. OkCupid - Efu na ewu ewu
OkCupid bụ otu n'ime saịtị mkpakọrịta nwoke na nwanyị a kacha mara amara na atụmatụ profaịlụ zuru oke nke ndị otu ndị ọzọ nwere ike nyochaa tupu ha ejikọ. Ọ dị na desktọọpụ na nke mkpanaka, yana ọtụtụ nkọwa nke ndị ọrụ nwere ike jupụta maka nsonaazụ kacha mma.
14. Ashley Madison - Ebe kasị mma ịlụ di na nwunye
Ashley Madison bụ otu n'ime ụdị, emere maka ndị lụrụ di na nwunye na-achọ inwe ihe nzuzo. Ejikọtaghị ya na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta maka nke a.
Enwere mgbochi na nzuzo ndị ọzọ iji nyere ndị ọrụ aka ịnọ na-enweghị aha ma ọ bụrụ na ha na-atụ egwu ijide ha. Ọzọkwa, Ashley Madison nwere nhọrọ njem ebe ndị otu nwere ike ịchọ ebe ha na-abịa n'ọdịnihu.
Match.com - Egwuregwu anọwo ebe kemgbe 1995 wee nye mmemme mmemme mmekọrịta mkpakọrịta nwoke na nwanyị iji nyere ndị sonyere na egwuregwu na mkpakọrịta nwoke na nwanyị aka.
Tinder - Ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị a na-ewu ewu ebe niile wee na-atụkwasị obi. Imirikiti ndị mmadụ na-eji ya maka nko, nyere ya nnukwu ọrụ ọrụ na algọridim ọnọdụ.
BlackPeopleMeet - Ruo ihe karịrị afọ 18, BlackPeopleMeet anọwo na-ejikọ ndị Amerịka America na-alụghị di ma ọ bụ nwunye na-achọ ịhụnanya. 100,000,000 nke saịtị ahụ nwere ike ịchụ nwoke, email, wee hụ ndị na-ele profaịlụ ha.
Grindr - Grindr bụ naanị maka ndị LGBTQA +. Ọ dabere na ọnọdụ ya, ndị ọrụ jiri ya mee ihe maka ijikọ, ọ bụ ezie na enwere ike ịme egwuregwu ogologo oge.
Ọtụtụ Azụ - Ebe nrụọrụ weebụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị sitere na Canada, mana na-enye ndị ọrụ ohere isoro ndị si n'akụkụ ụwa niile kwukọrịta.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị na saịtị na-ekpughe ndị mmadụ na ọdọ mmiri buru ibu karịa mmadụ na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ga-enwe ohere izute na ndụ n'ezie. Nke a bụ ikpe kachasị maka ndị ọrụ nwere otu ndị otu mmachi, dị ọhụụ n'obodo, ma ọ bụ na uzọ ọzọ.
N'ozuzu, ee, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwa ọdịnala dị mma, mana ọ ka chọrọ nghọta na ịkpachara anya. Ngwa nwere ihe nzuzo dị iche iche iji nyere ndị otu aka aka, dị ka nkwenye profaịlụ. Websitesfọdụ weebụsaịtị na-ejikwa aka nyochaa ndị sonyere ya, na-agbakwunye usoro nchekwa nke usoro ahụ.
Ndị mmadụ n'otu n'otu ekwesịghị inye ozi onwe ha tupu ha ezute mmadụ na ndụ n'ezie, dị ka aha nna ha, adreesị, ma ọ bụ ọbụna agbata obi ha. Ọ dịkwa mma ịhazi ụbọchị mbụ na oghere ọha. Kpọtụrụ enyi gị tupu oge eruo na ime ka ha mata na ha na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị na-eme mkpapụ abụghịkwa echiche ọjọọ.
Etinyela mmadụ ozi nkeonwe gị na ntanetị, ọkachasị tupu ị hụ onye ahụ. Ihe omuma a bu aha nnabata, onye oru, adreesị, na obuna agbata obi.
Mgbe ị zutere onye ọ bụla na ntanetị, dozie ụbọchị ole na ole mbụ ị ga-ewere ọnọdụ na ebe ọha na eze. Nke a nwere ike ịbụ kafe, họtel, ebe ihe nkiri, ma ọ bụ ebe ọhaneze ndị ọzọ. Zere ebe ndị dịpụrụ adịpụ dịka oke osimiri, ekwekwala ka ndị bịara abịa bata n’ụlọ.
N'ikpeazụ, kpọtụrụ enyi tupu ụbọchị ahụ agwa ha ebe ha nọ na oge ịlaghachi na-atụ anya. Gwa ha mgbe oge ruru ịla. Iji nye nchebe ọzọ, rịọ ka ha kpọọ ma ọ bụ dee ederede n'oge ụbọchị iji hụ nchekwa kachasị.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị maka oge mbụ nwere ike ịbụ ihe karịrị akarị! Iji hụ na ezigbo nchekwa na izute egwuregwu na mmadụ, soro ndụmọdụ ndị a:
Nwee obi iru ala. Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịdị iche na mmadụ karịa ka ha na-eme n'ịntanetị, yabụ dịrị njikere maka mmasị ịchọrọ ịgbanwe.
Zere ịdị na-emebiga iwu ókè. Mepụta nnọkọ mmekọrịta, dị ka ụbọchị nri ehihie, na-enye ndị ọrụ ahụ aka ịmara ibe ha na-enweghị mmetụta na ha ga-etinye ọnụ ọtụtụ awa.
Nyochaa mkparịta ụka ndị ahụ tupu ị gawa ụbọchị. Gụgharịa profaịlụ nke onye ahụ ma nyochaa ihe a tụlere, ma hazie isiokwu mkparịta ụka n'ozuzu.
Ee, ọ ga-ekwe omume! Ọ bụrụ na mmadụ abụọ na-ezute, na-adabakọ, na onwu dị, mmekọrịta ahụ nwere ike bụrụ ihe kwụsiri ike na nchekwa. Ọ na-eme kwa ụbọchị, maka saịtị dịka Eharmony.
Ihe na-eme ka mmadụ na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ya na-akpa ịntanetị bụ ịmata ihe ha chọrọ na mmekọrịta dị na mbụ. Dabere na ndepụta dị n'elu, enwere ọtụtụ ụdị mmekọrịta a ga-ahụ na saịtị ndị a.
Kpachara anya ma nwee uche mgbe ị na-eji saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Saịtị ọ bụla dị ebe a nwere ihe ọ ga-enye, dabere na ihe onye ọrụ ahụ chọrọ.
Ngọnarị: Ozi ahụ abụghị ndụmọdụ ma ọ bụ onyinye ịzụta. Purchasezụta ọ bụla sitere na nkwupụta mgbasa ozi dị n'elu ka emere n'aka gị. Gaa na onye ndụmọdụ ọkachamara ma ọ bụ ọkachamara tupu ịzụta ọ bụla. Purchasezụta ọ bụla nke sitere na njikọ a dabere na usoro na ọnọdụ ikpeazụ nke ire ere weebụsaịtị ahụ a kpọtụrụ aha na isi mmalite. Onye mbipute ọdịnaya ya na ndị na-ekesa nkwekorita ya anaghị ewere ọrụ ọ bụla ozugbo ma ọ bụ na-enweghị isi. Ọ bụrụ na ị nwere mkpesa ọ bụla ma ọ bụ mbipụta nwebisiinka metụtara edemede a, biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ akụkọ a bụ ihe. Njikọ ndị dị na nyocha ngwaahịa a nwere ike ime ka onye edemede nweta obere ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ngwaahịa akwadoro na enweghị ụgwọ ọzọ maka gị.
15 nke ngwa egwu kacha mma n'ịntanetị iji chọta mmekọrịta
Na-atụ anya itinye ụkwụ gị n'ime ụwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị mgbe ogologo oge nke ịme mmekọrịta ọha na eze dị? Ọ bụrụ na kenha na a nwere ike ọhụrụ na onye òtù ọlụlụ na "tupu oge" e mgbagwoju anya-agbakwunye a zuru ụwa ọnụ ọrịa na mix mere ka ọ ọbụna trickier ịchọta na ebua ma ọ bụ njikọ. N'oge ihe ọhụrụ a, ịchụ nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere ike iso nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere ike ịbanye n'ịntanetị nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma iji mata mmadụ.
Ma nke bụ́ eziokwu bụ na iso nwoke na nwaanyị na-akpa n’ onlinentanet nwere ike ịna-ajọ gị njọ. Ọ bụghị naanị ịme mkpebi dabere na foto ole na ole na usoro ntanetị, ma ọ bụ ihere na-ezigara ndị bịara abịa ozi naanị (ma ọ bụ DM) ka ọ bụrụ mmụọ. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwa na ndị ọrụ nwere ike ime ka naanị swiping dị ka ọrụ siri ike.
N'ezie, ndị na-ege ntị n'ịntanetị ga-eto na 37.5 nde ndị ọrụ site na 2023, dị ka data sitere na Statista. Na 2040, eHarmony buru amụma na pasent 70 nke ndị di na nwunye ga-amalite mmekọrịta ha na ntanetị. O kwere omume ime ka mkpakọrịta nwoke na nwanyị nwee mmetụta dị ka njikwa gị, n'agbanyeghị, ị ga-ahụ ezigbo ngwa. Dịka ọmụmaatụ, enwere nyiwe niche akọwapụtara maka ndị hụrụ ọrụ ugbo n'anya , anụ ezi , ma ọ bụ ọbụna ịkpụ afụ ọnụ (ee, ezigbo).
Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ime a nabatara umu njikọ na, sịnụ, onye karịrị 50, ọhụrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mgbe alụkwaghịm, na-enwe olileanya maka a mebere video ụbọchị, ma ọ bụ na-achọ a mmekọrịta, ndị a online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwa (ụfọdụ, ọbụna free) ekpuchi niile na ntọala.
Asọmpi kachasị ewu ewu n'ịntanetị mkpakọrịta nwoke na nwanyị na steeti 17 dịka nyocha PCMag nke mmadụ 2,000. Dị ka otu n'ime ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị OG (a na-akwagharị ya na weebụsaịtị-naanị na weebụsaịtị na ngwa), Match nwere arịrịọ doro anya nye ndị dị n'etiti 45 na 65 na-achọ mmekọrịta siri ike; nyocha ọzọ nke SurveyMonkey chọpụtara na pasent 58 nke ndị okenye 45-54 afọ na-eji Match, ihe karịrị okpukpu abụọ nke pasent na-eji Tinder. Nwere ike ibudata ya n'efu, ọ bụ ezie na nke ahụ ga-egbochi gị ịme nchọgharị; ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ozi nwere ike mmekọ, ndenye aha na-amalite na $ 21.99 a ọnwa.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị ngwa ọdịnala abụghị nanị maka millenials; Pasent 20 nke ndị ọrụ ịntanetị dị n’agbata afọ 55 ruo 64 ejirila ngwa ma ọ bụ ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị, dị ka nghoputa sitere na teknụzụ na ụlọ ọrụ nyocha Morning Consult. OurTime amama echiche nke hookup omenala n'isi ya; kama, ọ na - agba ndị ọrụ ume ịchọ pals pen, ndị enyi, ụbọchị, mmekọrịta dị ogologo oge na ndị mmekọ di na nwunye. Ngwa nbudata na-ebudata na-ahapụ gị izipu ozi ịntanetị, ịchụ nwoke, ma dakọtara na ndị mmekọ nwere ike, yana ndenye aha ego ($ 38 kwa ọnwa) na-enye ohere maka atụmatụ ndị ọzọ dịka ikike ịhụ onye masịrị profaịlụ gị.
Bumble kewapụrụ onwe ya na ndị ọzọ niile na-ahụ maka mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-ejupụta ụlọ ahịa ngwa ahịa site na ịchọrọ ka ụmụ nwanyị mee njem mbụ ozugbo emere egwuregwu. Also na-enweta 24 awa iji zipu ozi, belụsọ na itinye ego n'ime ndị otu Boost, nke na-amalite na $ 10.99 maka otu izu. Womenmụ nwanyị hụrụ ngwa a n'anya n'ihi na ọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ozi a na-achọghị, ndị nwoke hụkwara ya n'anya - n'eziokwu, pasent 58 nke ndị zaghachirinụ ndị họọrọ Bumble na nyocha PCMag bụ ụmụ okorobịa-n'ihi na ọ na-ewe ụfọdụ nrụgide na-ebute. Na mgbakwunye, ozugbo ịchọtara mmadụ ịchọrọ, inwere nhọrọ nke ịga ụbọchị vidiyo na ngwa.
Tinder nwere ike iweta "omenaala hookup," mana ọ ka bụ otu n'ime ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị kacha elu na US O nwere ihe ruru nde ndị ọrụ asatọ, ihe ka ọtụtụ n'ime ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị ndị ọzọ nyochara site na Statista . Nke ahụ pụtara na ị nwere ezigbo ohere siri ike nke ị ga - emecha mee ka gị na onye na - amasị gị nwee mmasị — ọbụlagodi na ọ na - ewe ọtụtụ iji aka ekpe wee banye ebe ahụ. Ngwa a bụ n'efu, mana ịnwere ike ịnweta atụmatụ adịchaghị dị ka Tinder Plus bido na $ 9.99 kwa ọnwa.
5. Ọtụtụ Azụ
Onye ọzọ n'ime ndị mbụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị weebụsaịtị-tụgharịrị-ngwa ọdịnala na anya kwupụta ịchọta mmekọrịta, POF nwere 90 nde ndị ọrụ na ya heydey. Ọ ka na-ewu ewu (Statista wepụtara ya dị ka ọnụọgụ abụọ), yana ngwa ahụ na- azọrọ na ị nwere narị ugboro abụọ na abụọ ị nwere ike ịbanye mkparịta ụka na awa 24 mbụ gị karịa na ngwa ndị ọzọ. Na ntuli aka nke ndi oru ya, ngwa a choputara na pasent 44 bu ndi nne na-azughi nne — na ha choputara onye ha na ha ga enweta di pasent iri na otu ngwa ngwa. Ibudata ma swipe n'efu, ma kwalite iji tinyekwuo foto ma ọ bụ gosipụta mbụ na ndị mmekọ nwere ike ịmalite na $ 19.99.
Mgbe o juputara na ngwa ajuju ajuju nke ngwa a (chee na ndi okacha amara dika: “ihe kachasi nma m bu…” na “ihe m ga - eme ka karaoke bu…”), Hinge ga-ebido ibanye na ndi oru ndi n’acho ihe ndia Algọridim ahụ na - ejikwa egwuregwu gị “ Kwekọrọ Kwekọ ” na - enyere gị aka - onye ị ga - esoro okpukpu asatọ karịa, Ọ bụghị naanị na ngwa ahụ na-egosi gị mmadụ ole masịrị gị, ọ na-agwakwa gị ihe masịrị ha gbasara gị, na-eme ka ọ dị mfe ịmalite mkparịta ụka.
OKCupid si algọridim na-eji usoro nke ajụjụ iji chọpụta ihe “pasent” ị ga-dakọtara na nke ọ bụla nke ya nde mmadụ ise. Ihe ndozi a na-amasịkarị ụmụ nwanyị, bụ ndị mejupụtara pasent 58 nke ndị zaghachirinụ ndị họọrọ ngwa a na PCMag's ntuli aka. Ọ dịkwa oke oke, na-enye ụdị njirimara nwoke na nwanyị na mmekọ nwoke na nwanyị 20 ka ị nwee ike ịkọwa onwe gị agbanyeghị na ịchọrọ ma dakọtara na onye ị na-achọ.
Na mbụ ngwa Facebook, Zoosk bụ otu n'ime saịtị kachasị nwee mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ebe ahụ, yana ihe karịrị nde 30 na nbudata ebe ọ bụ na mmalite ya na 2007. Taa, o nwere ihe karịrị otu nde ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike, dị ka Statista si kwuo - na 500,000 nke ndị na-akwụ ndị otu, nke pụtara na ihe karịrị ọkara nke ndị ọrụ na-etinye aka na-achọ egwuregwu. Kama ịmanye gị ka ị dejupụta ajụjụ dị ogologo, ngwa ihe algorithm nke ngwa ahụ kwuru onye gị na ya na-emekọrịta ihe ka mma ijikọ egwuregwu ndị nwere ike.
N'oge a, eHarmony bụ aha ụlọ. Ọ bụ egwuregwu kacha asọmpi nke Match, yana agbụrụ abụọ kachasị buru ibu bụ ụmụ afọ 30 ruo 44 na 55- ruo afọ 64. Usoro ntinye aka-nke gụnyere nkọwa zuru oke, ajụjụ ajụjụ 150-bụ njem, mana akara ahụ kwuru na ọ bụ ọrụ maka ịmepụta 4% nke alụmdi na nwunye na US Plus, ndị otu ndebanye aha nwere nhọrọ iji gaa video ụbọchị tupu nzukọ na mmadụ.
10. Kọfị Na-ezute Bagel
Kwa ụbọchị n’ehihie, Kọfị Na-ezute Bagel ga-edozi ma zitere gị egwuregwu ọkụ - ma ọ bụ “bagel” dịka ha kpọrọ ya-nke algorithm họọrọ. Na-enweghị swiping aka na mmachi nhọrọ kwa ụbọchị, a na-eme ngwa a iji ghara ịba ụba. Na mgbakwunye, profaịlụ miri emi na ajụjụ "ice-breaker" na-agba ume mkparịta ụka bara uru, na-eme ka ngwa a bụrụ nke zuru oke maka ndị na-achọ ịmalite mmekọrịta siri ike.
Site na ndị ọrụ karịrị nde 14, Hily na-anọchi anya "Hey, masịrị m gị!" Ngwa ahụ na-eji AI iji meziwanye mmekọrịta oge niile, ma nwee atụmatụ dịka akụkọ Hily iji nyere gị aka ijide onye ị bụ. Ngwa a bụ n'efu, yana ndenye aha nhọrọ maka ahụmịhe mgbasa ozi na-enweghị njirimara na ọnọdụ nnabata.
Ọ bụrụ n’ị na-achọ ndị otu nwa ojii ibe gị ndị kerịta mmasị gị, BLK bụ ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nke ọkachamara na ịchọpụta njikọ ahụ na ndị ọrụ ha. N'ime ihe karịrị nde 4, ngwa efu na-enye gị ohere ijikọ ma kparịta ụka na ndị mmekọ nwere ike. Ma ọ bụ, nweta nkwalite na ndị adịchaghị adịgboroja ($ 10 kwa ọnwa) maka ahụmịhe na-enweghị mgbasa ozi, profaịlụ ebuli elu, ọnụọgụ ndị na-enweghị njedebe, yana ikike "ịlaghachi azụ" site n'inye mmadụ ohere nke abụọ.
13. Obi ụtọ
A nwere enyi nwanyị ahụ mara mma ma ọ maghị aha ya? Na-ele onye ọ bụla anya mgbe ị na - eje ije na nkịta gị mana ị naghị ebute mkparịta ụka? Happn bụ ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nke nwere ike inye aka mee ka ndị ahụ yiri ka ha efunahụ njikọ dị adị. Site n'iji ọnọdụ dị na ekwentị gị, ị nwere ike dakọtara na ndị mmadụ na-na ngwa ndị nọ nso. Na ihe karịrị 100 nde ndị ọrụ n'ụwa nile, Ohere inweta bụ na ị nwere ike ịchọta ndị agbata obi gị.
Emebere site na ụmụ nwanyị queer, LGBTQ + mkpakọrịta nwoke na nwaanyị (yana mmekọrịta mmadụ na ibe ya) bụ maka ụmụ nwanyị na ndị na-abụghị ndị chọrọ ịchọta ịhụnanya na nchekwa. Maka ndị ọrụ ha dị nde 6, HER na-enye ndị mmadụ ngwa ma hazie ihe omume iji nyere aka gbaa ọkụ ndị ahụ ume.
15. Ime gburugburu
Ọ bụrụ na ị jisiri ike ịchọta ọkara ọzọ gị ma chọọ izere ịbanye n'ime ihe efu, Inner Circle chọrọ ndị ọrụ niile ka ha kwenye "nkwa "bọchị Dị Mma" nke na-akọwa nkọwa nke nkwa iji bụrụ "nkwanye ùgwù, ntụkwasị obi, yana ịgụnye." Ngwa ahụ na-enye profaịlụ zuru ezu, ihe nzacha pụrụ iche, na mkparịta ụka mkparịta ụka-yabụ ị nwere ike izere ozi ndị otu egwu "hey" na-atụ ụjọ.
Ngwa kacha mma nke mkpakọrịta nwoke na nwanyị iji mee nke a otu afọ maka ịhụnanya
Onye ọ bụla maara onye zutere ha "onye ebighi ebi" n'agbanyeghị mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị mana dịka mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'onwe ya, ịchọta saịtị ziri ezi maka gị nwere ike ịnwe nnwale na mmejọ. The Kochava Mkpokọta, onye nnabata nke nnukwu ahịa data data mkpanaka, kpochapụrụ nọmba iji kwado saịtị ole na ole dabere na ọnụọgụ ndị ọrụ. "Anyị nwere data dị na ihe karịrị ijeri ngwaọrụ 7.5," ka Jake Courtright, onye isi njikwa Kochava na-ekwu. “Dịka akụkụ nke data data a, anyị nwere ozi‘ ngwa eserese ’na ngwaọrụ ndị a, nke bụ n’ezie ndepụta nke ngwa ndị arụnyere na ngwaọrụ ndị a. Anyị lere ngwa ọdịnala niile gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị na Google Play na ụlọ ahịa ngwa ngwa, wee mata ngwa ise nwere ọtụtụ ntinye n'ime data anyị. ”
Mana n'ihi na ọ bụghị anyị niile na-eme mkpebi dabere na ọnụọgụ naanị, anyị jikọtara ndepụta a na nhọrọ ole na ole ndị ọzọ nwere ike ịdabara ọnọdụ gị. Offọdụ n'ime ndị a na-enye ndị LGBTQ + ndị ọrụ, ndị ọrụ ụfọdụ afọ, ndị isi ojii ma ọ bụ ndị ọrụ BIPOC, ndị nwere ọdịmma pụrụ iche na ndị ọzọ nwere ike ha agaghị ahụ ụbọchị zuru oke n'otu ngwa kachasị ewu ewu. Ma ị na-achọ ihe nkịtị fling, a rebound iji nweta ihe nkwụsị ma ọ bụ gị ọzọ ogologo oge mmekọrịta, ị nwere ike ịmalite site na nbudata otu n'ime ndị a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwa.
Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ ọnlaịnụ ma eleghị anya, ị ga-amata gbasara Tinder. Dabere na Kochava Collective, ngwa a nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị ọrụ niile na-eme mmekọrịta nwoke na nwanyị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọrụ na-atụgharị na Tinder maka nzukọ ndị na-adịghị ahụkebe, ndị ọzọ achọpụtala ịhụnanya ogologo oge ebe a.
Na Bumble, ụmụ nwanyị bụ ndị na-ebute nkwukọrịta. N'ezie, nwoke na nwanyị na-eme njem mbụ abụghị obere esemokwu maka ụmụ nwanyị LGBTQ, mana ụmụ nwanyị na-achọ nwanyị nwere ike ịchọta ya ume. Kochava na-ekwu na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ya dabara na afọ 26 ruo 35, yabụ ndị okenye nwere ike ịmasị otu ahụ.
Onye ọ bụla nọ na egwuregwu mkpakọrịta nwoke na nwanyị ruo nwa oge nwere ike ịnụ banyere OkCupid, nke dị kemgbe 2004. OG nwere ngwa yana akwụkwọ nbinye aka ya banyere ihe niile site n'okpukpe ruo obereekere butter vs jelii iji nyere gị aka ịchọta onye gị na ya zuru oke.
N'ime ngwa nke Kochava kpoputara, nke a nwere nke ọdụdụ nwa mgbe Bumble, nwere ihe karịrị ọkara ndị ọrụ ya na-erubeghị afọ 36. Na, dịka aha ya si kwuo, saịtị ahụ na-azọrọ ịbụ otu n'ime nyiwe mmekọrịta kachasị ukwuu n'ụwa. .
Ndị ọrụ nwere obere ahịrị na-achị ọchị na ụdọ ọla ọcha nwere ike ịchọta mmụọ ndị ikwu na ngwa na ọtụtụ mmadụ na igwe mmadụ ha. Ihe ndekọ Kochava na-egosi na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ MeetMe nọ na 46 ruo 55 afọ, na-esochi 55 ruo 65 bracket.
Na mgbakwunye na inwe ọtụtụ ọrụ, Kochava na-ekwu n'ụzọ ahụ karịa ụmụ nwanyị na-ebudata Happn, ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị dabeere na ọnọdụ. Iesmụ nwanyị na-achọ gents, ka nsogbu ọ bụla dịrị ụnụ.
Ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị kacha mma
Ndị editọ anyị n’adabereghị onwe ha na-eme nchọpụta, nwalee, ma kwado ngwaahịa ndị kachasị mma; ị nwere ike ịmụtakwu banyere usoro nyocha anyị Ebe a. Anyị nwere ike ịnata commlọrụ na ịzụrụ mere site na njikọ ndị anyị họọrọ.
Entbanye na ụwa nke ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị nwere ike ịba ụba, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị jighi n'aka ihe ị ga-ebudata. Ejiri ụfọdụ ngwa maka mmekọrịta dị mkpụmkpụ, ebe ndị ọzọ na-agba ume ịmara onwe ha nke ọma tupu ha ezukọ maka mmanya ma ọ bụ kọfị FaceTime. Ma ị na-achọ isi ala wara wara ma ọ bụ maka ịtụ egwu, enwere ọrụ ruru gị aka.
N'ebe a, anyị achịkọtala ngwa ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị kachasị mma, yabụ ị nwere ike izute egwuregwu gị-ọ bụrụ n'abalị ka ọ bụ ruo mgbe ebighi ebi.
Ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị kacha mma nke 2021
N'ozuzu Kacha Mma: Mgbabere
Ihe kacha mma maka alụmdi na nwunye: Asọmpi
Kachasị maka Nanị: Raya
Kachasị mma maka ụbọchị mbụ: Bumble
Best LGBTQ dịwara App: ya
Ihe kacha mma maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị: JSwipe
Ihe kacha mma maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị: Tinder
Ihe mere anyị ji họrọ ya: Mgbakwunye na-enye gị ọnụ ọgụgụ dị nta nke njikọ kwa ụbọchị, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na-achọ mmekọrịta dị njọ karị.
Na-ekerịta ihe omuma banyere ndi mmadu, tinyere ihe ndi na-achoghi
Na-elekwasị anya na mkparịta ụka bara uru na ịme mmekọrịta
Naanị na-enye ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ọkụ ọ gwụla ma ị kwụrụ ụgwọ iji kwalite
Chọrọ ka ndị mmadụ kwụọ ụgwọ iji nye ọkụ ọkụ "rose", na-eme ka ngwa ahụ dịtụ mgbagwoju anya
Hinge malitere dị ka ụzọ iji jikọọ ndị enyi nke ndị enyi na ndị nọ na netwọkụ gị. Mgbe onye isi ụlọ ọrụ Justin McLeod guzobere ya, ngwa ahụ gosipụtara profaịlụ ndị mmadụ dabere na nso yana ndị enyi Facebook ha jikọrọ ọnụ. Ugbu a, ọ na - ejikọ ndị ọrụ yana ndị nọ nso agbata obi ha họọrọ.
Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ijikọ mmadụ site na ịpị bọtịnụ mkparịta ụka ma dakọtara ma ọ bụ hapụ okwu na ibe. Profaili na-akpali kpaliri ka mkparịta ụka malitere dị ka "Ọ bụrụ na ịhụ n'anya nke a bụ ihe ọjọọ, Achọghị m ka m bụrụ ihe ziri ezi…" Na "Otu ihe m ga-achọ ịma banyere gị bụ…."
Mgbabere na-egosi gị ozi ndị ọzọ gbasara ndị mmadụ, yabụ ọ bụrụ na iru ala ị na-ezute ndị bịara abịa na ịntanetị, nke a na-eme ka ọ dị mfe. Ọ na-enye gị aha ndị mmadụ na-abụkarị agbata obi ha, afọ, ogo, ọrụ, obodo, na kọleji.
Ngwa a bụ n'efu mana ọ chọrọ ka ndị mmadụ kwụọ ụgwọ, na-arịọ ha ka ha kwụọ ụgwọ maka "Roses" mebere maka akara egwuregwu ga-ahọrọ maka gị dabere na ihe ị na-achọ. Ọ na-adị nnọọ ka ihe omume nke Bachelor . Ihe algorithms na-eburu kwa ụbọchị maka egwuregwu gị kachasị mma abụghịkwa ihe na-enye aka. Ọtụtụ oge ha ga - ahọrọ onye ga - adị anya ma ọ bụ nwee njikọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, ha nwere ike igosi gị onye ị ma nke nwere ike iru gị ala.
N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ ebe ị ga-ekwenye ka dakọtara tupu eziga ozi, ndị mmadụ na Hinge nwere ike zigara gị onye mmeghe iji mee ka mkparịta ụka ahụ gaa. Mgbe ọ bụ free, e nwere a ugwo version nakwa. Ndị otu a họọrọ bụ ihe dịka $ 30 maka otu ọnwa, $ 60 maka ọnwa atọ, ma ọ bụ $ 90 maka ọnwa 6 wee nye gị ohere izipu njikọ na-akparaghị ókè ma debe nzacha siri ike.
Ihe kacha mma maka alụmdi na nwunye
Mere Anyị họọrọ ya: Anyị họọrọ Match n'ihi na ọ bụ ihe kasị mma nhọrọ maka oké njọ daters bu di na nwunye kpọrọ.
Ndị otu na-achọ mmekọrịta ma ọ bụ alụmdi na nwunye
Na-enye ndị ọrụ ọtụtụ ozi gbasara egwuregwu nwere ike
Free nhọrọ na-enye ọrụ naanị a preview, na-enweghị ụzọ iji nweta ọkụ ma ọ bụ ozi
N'ihi na ọ bụ ngwa ị kwụrụ, ndị ọrụ jiri ya kpọrọ ihe
I nwere ike na-amalite mkparịta ụka na nhọrọ Match onyinye gị
Asọmpi bụ ihe eji echere ochie maka otu ihe. N'ihi na ndị ọrụ ga-akwụ ụgwọ maka ndị otu, ọ pụtara na ndị sonyere na-elekwasị anya na nkwa. Ejiri Gary Kremen na Peng T. Ong guzobere Match.com na San Francisco na 1993. Kemgbe ahụ, ọ ka na-ewu ewu, ọkachasị ndị na-achọ mmekọrịta dị mkpa.
Mgbe ị debanyere aha, ị banyere aha gị, afọ, ogo gị, ma ị chọrọ ụmụaka ma ọ bụ na ị chọghị, otu onye na-alụbeghị di, na ọ bụrụ na ị na-ese anwụrụ. Then ga-azakwa ajụjụ a bụ “Gịnị kacha eme gị obi ụtọ?” ịhọrọ ihe omume gụnyere egwu, nri, ịde blọgụ, ihe nkiri na-ekiri binge, egwuregwu na ndị ọzọ. Ọzọ, ị họrọ ihe ị na-achọ onye gị na ya ga na-alụ, gụnyere afọ ole ị dị, ogo ya, okpukperechi gị, na ma isiokwu ndị ahụ “ga-enwerịrị.”
Site na nhọrọ a na - akwụghị ụgwọ, ndị otu na - enweta ozi pere mpe sitere na “ihe kachasị elu” ha bidoro họrọ maka ha dabere na ndakọrịta. Nhọrọ dị oke mkpa na-enye ndị otu aka izi ozi na-akparaghị ókè, mmasị, ikike ịhụ onye ọ bụla masịrị gị na onye lere profaịlụ gị, mkparịta ụka n'otu n'otu na ọkachamara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, na ndị ọzọ.
O di nwute, ọ bụrụ na ị nwere mmasị iji Match, ị ga-akwụ ụgwọ; ma ọbụghị, ịnweghị ike ịhụ onye na-ezipụ gị ma ọ bụ ihe ha na-ekwu. Ndị otu na-efu ihe ruru $ 18 kwa ọnwa maka atụmatụ kwa afọ, ihe dịka $ 22 kwa ọnwa maka ọnwa isii, yana ihe dịka $ 30 maka ọnwa atọ.
Ihe mere anyị ji họrọ ya: Raya bụ onye ama ama maka ịbụ naanị mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-eme mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ndị na-eme ihe nkiri na-agakarị.
Ndị otu na-asọpụrụ ma na-atọ ụtọ
Ihe iche nke ngwa a na-eme ka o nwekwuo obi uto na ihe na-adọrọ adọrọ
Obi ụtọ ịhụ profaịlụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị
Ndị otu ga-akwụ ụgwọ maka mmasi ndị ọzọ kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ha ruru oke ụbọchị ha
Na-arụ ọrụ na iPhones
Raya bụ onye ama ama maka ịbụ otu n'ime ngwa egwu mkpakọrịta nwoke na nwanyị, na-atụgharị ndị na-ede akwụkwọ A na ndị na-eme ihe ike dị ka ndị otu. N'ihi na ọ bụ naanị ịkpọ òkù, enwere usoro ngwa, ndị mmadụ ga-akwụ ụgwọ iji bụrụ ndị otu, enwere arịrịọ dị elu karịa ya karịa ngwa a na-ahụkarị.
Raya dị ihe dịka $ 7 kwa ọnwa ma ị nwere ike ịfefe ndị mmadụ n'akụkụ ụwa niile. Ọ bụrụ n ’iru ihe ndị na-amasị gị kwa ụbọchị, ịnwere ike ịkwụ ụgwọ ihe dịka $ 7 maka 30 karịa mmasị kwa ụbọchị, ma ọ bụ ị nwere ike ịkparịta ụka na njikọ gị ugbu a, nke ngwa ahụ na-agba gị ume ime. Ozugbo ị bụ onye otu, ị nwere ike inye ndị enyi gị ohere gafere nke nwere ike inye aka mee ka nnabata ha kwenye, n'agbanyeghị na ngwa ahụ nwere ikike ịjụ ngwa.
Ndị otu nọ n'akụkụ ụwa niile ma na-arụ ọrụ na mpaghara okike. Ọ bụ ihu ọma Soho House maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Nwere ike ijikọ akaụntụ Instagram gị, họrọ abụ, mee ihe ngosi mmịfe nke foto, ma nwee ike ịchọ njikọ ịhụnanya ma ọ bụ ndị enyi. I nwekwara ike chọọ site na ọnọdụ iji hụ onye nọ nso na ngwa ahụ. Raya ga-egosikwa gị ụdị ndị enyi ị nwere ma ọ bụrụ na ị nwere nọmba ekwentị ibe gị, yabụ ị nwere ike ịjụ onye gị na ya ga-ekwenye maka ụbọchị gị. Nwekwara ike ịchọ ndị otu nọ n'otu obodo ma ọ bụ na ụlọ ọrụ a kapịrị ọnụ, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịnweta netwọk ma ọ bụ izute ndị mmadụ.
Mere Anyị họọrọ Ya: Bumble nwere a pụrụ iche echiche: Women ozi ndị ikom mbụ na mgbe ahụ, ha na-nyere 24 awa ime, na-eme ka ọ a nwanyi-chụpụrụ ngwa.
Ọ dị mfe ijikọ ọtụtụ mmadụ n'otu oge
Women ozi mbụ otú ha nwere ike họrọ isiokwu
Ọnọdụ dabere na ya ka ị wee hụ onye nọ gị nso ma ọ bụrụ na ị nọ ezumike ma ọ bụ n'obodo ọhụrụ
Mụ nwoke nwere ike ịzaghachi n’ụzọ dị mfe ma nwekwaa iyi egwu
Ọtụtụ ụmụ nwoke anaghị edepụta ọtụtụ ozi gbasara onwe ha
I nwere oke oge iji oghere, yabụ ị ga-elele ngwa ahụ oge niile
Mgbe nwanyị malitere nzụkọ Whitney Wolfe malitere Bumble na 2014, ọ dabere n'echiche bụ na ụmụ nwanyị ga-ebu ụzọ zie ozi, nke pụtara na ha nwere ike ịhọrọ mbido mkparịta ụka ma chịkwaa akụkọ ahụ. Wolfe gara n'ihu na Forbes 30 N'okpuru 30 ndepụta yana oge 100 List wee bụrụ nwanyị nke ọdụdụ ka ọ kpọta ụlọ ọrụ ọha na eze naanị 31.
Iji Bumble dị mfe. Mee profaịlụ na foto gị na ozi gbasara onwe gị, mgbe ahụ ị nwere ike ịnwe atụmatụ efu ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka nhọrọ ndị ọzọ. Atụmatụ "Chakwasa ihie" na-ekwe nkwa ruo ugboro 10 karịa egwuregwu ma tinye gị n'ihu ahịrị maka nkeji iri atọ ka egwuregwu gị nwere ike hụ gị na mbụ. Can nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe dịka $ 1 maka ntụpọ 30, ma ọ bụ ihe dịka $ 6 maka otu ihe ngosi. Ma obu inwere ike inweta ihe ngosi 30 n’ihe dika $ 50.
Nke ọzọ bụ SuperSwipe, nke kwuru na ị ga - enweta "mkparịta ụka ruru 10x." SuperSwipes na-enye gị ohere ịdị ka onye, ​​yabụ mgbe ha malitere swiping, ị ga-abụ otu n'ime ndị mbụ ha hụrụ. Ihe dị ka $ 1 maka SuperSwipes 30 na $ 3 nke ọ bụla maka SuperSwipes abụọ. Ọ bụrụ n’ịchọghị ịkwụ ụgwọ maka nhọrọ abụọ a, ịnwekwara ike ịkwalite akaụntụ gị ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa iji kpọghee atụmatụ niile n’otu oge. Ndị ọrụ adịchaghị nweta nkwalite maka ihe dị ka $ 18 wee nata ihe na-enweghị njedebe, nzacha dị elu, ọnọdụ njem iji hụ onye na-awagharị n'akụkụ ụfọdụ, yana njedebe na-akparaghị ókè ọ bụrụ na ị gafere ụzọ na-ezighi ezi na mmadụ, n'etiti ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Bumble bụ ezigbo nhọrọ maka onye na-amalite ịmalite ịchọta ndị niile tozuru etozu. To ga-eji swipe ziri ezi iji kwekọọ na ndị mmadụ, wee nwee awa iri abụọ na anọ iji mee njem mbụ wee bido nkata ahụ, yabụ na ị ga-enyocha ngwa a ugboro ugboro, ma ọ bụghị ya na egwuregwu ga-agwụ. Thenmụ nwoke nwere awa 24 ịzaghachi. Nwere ike ịchọ ngwa ahụ na nzacha, na-ahọrọ onye ị nwere mmasị na ya (ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, ma ọ bụ mmadụ niile), afọ dị nso, na ogologo. Nwekwara ike ịtọ nzacha dị elu, na-achọ otu ịdị elu, akara akara igwe, usoro mmụta, na ndị ọzọ.
Kachasị mma maka LGBTQ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị: ya
Ihe mere anyị ji họrọ ya: Anyị họọrọ ya n’ihi na ọ bụ ngwa mmekọrịta kachasị ukwuu n’ụwa maka ụmụ nwanyị LGBT.
HER bụ ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị kachasị ukwuu maka ụmụ nwanyị nwanyị nwere mmasị nwanyị na nwanyị
Ngwa ahụ na-ekerịta ozi LGBTQ + na ihe omume mpaghara na-ewere ọnọdụ, na-enye oghere dị nchebe
Ndị mmadụ na-eme mkpesa na ụfọdụ di na nwunye na-achọ threesomes na ngwa ahụ
Ọ bụrụ na ị kwụghị, ị ga-eche ọtụtụ awa maka swipes ọzọ
HER bụ ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị kachasị ukwuu n'ụwa maka ụmụ nwanyị na-enweghị nwanyị, na-enye ike ịmekọrịta, yana ị na-enye akụkọ gbasara nzuko na mpaghara na nchekwa. Ngwa ahụ na-arụ ọrụ dịka obodo ma na-anwa ịnabata ma na-akwado.
Dị ka Tinder, HER bụ ihe gbasara swiping. Ghichaa aka ekpe pụtara na ị nweghị mmasị na onye ahụ, ebe ị na-efegharị aka nri (ma ọ bụ obi emoji) pụtara na ị ga-achọ ịmata onye ahụ. Mgbe ahụ, onye ahụ nwere ike ikpebi ma mmetụta ahụ ọ dị na ibe ya ma zitere gị ozi.
Ọ bụ ezie na ọ bụ n'efu, e nwekwara ụdị atọ nke ndị otu ndebanye aha adịchaghị. A adịchaghị, otu ọnwa otu na-amalite na ihe $ 15, n'ihi na ọnwa isii ọ bụ gburugburu $ 60 na otu afọ ọ bụ Olee ihe enyemaka $ 90.
Ihe mere anyị ji họrọ ya: JSwipe bụ nhọrọ dị mma maka ndị Juu ka ọ na-ete aka ma zute, n'agbanyeghị ebe ha dabere.
Ike izute ndị Juu na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye n'ụzọ dị mfe
Nhazi nke ngwa na-eme ka o sie ike ịhụ ebe ndị mmadụ si ma ọ bụ swiping si
JSwipe bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye Juu ma ọ bụ chọọ iso nwoke ma ọ bụ nwanyị ndị Juu nwee mmekọrịta. Amalitere na 2014 maka Ememe Ngabiga site n'aka onye guzobere David Yarus, onye rụkwara ọrụ maka Birthright Israel na Hillel n'oge ahụ, onye na-asọmpi, JDate mechara nweta ngwa ahụ sitere na Brooklyn.
Na JSwipe, ị banyere obere ndụ, agụmakwụkwọ, na afọ gị. Agwara gị ka ị dejupụta ma ị ga-edebe kosher na ụka gị. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite swiping. Ibe profaịlụ profaịlụ gị na ibe Facebook gị, yabụ ọ ga - egosi gị ihe masịrị gị ịkekọrịta yana egwuregwu dabere na ihe ị masịrị na Facebook.
JSwipe na-enye nsụgharị n'efu, yana ndị otu klas mbụ, ebe ị nwere ike ịga naanị ihe omume ma nweta elele dị ka ihe ọ freeụ freeụ na-akwụghị ụgwọ na ahịa. Nanị ụdị a na - enye gị ohere ịhụ onye masịrị profaịlụ gị, bulie profaịlụ gị maka egwuregwu ndị ọzọ, swipe
Otu onye otu ọnwa bụ ihe dị ka $ 25, ọnwa atọ na-efu ihe dịka $ 45, yana ọnwa isii ịbụ $ 60. Dị ka Tinder, ọ na-egosi gị onye na-agbagharị gburugburu gị dabere na ọnọdụ, mana ị nwekwara ike ịtọ okirikiri mile nke buru ibu ma hụ ndị na-alụbeghị di na ụwa.
Ihe Mere Anyị Ji Họrọ Ya: can't gaghị agbachi nkịtị na ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mbụ, Tinder, nke kpalitere swipe. Ọ dị mma maka mkpakọrịta nwoke na nwanyị ma ọ bụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị ogologo oge.
Zuru oke maka ịkụnye mkpịsị ụkwụ gị n'ụwa nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị
Mfe ịnyagharịa, karịsịa maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwa beginners
Otu n'ime nhọrọ kachasị njọ na-elekwasị anya na nko-nko
Na-emesi ike na nhọrọ na-adịghị agwụ agwụ ị na-ezute mgbe ị na-agbanye
Tinder bụ ngwa nke bidoro ya niile. Ọ malitere na 2012 wee gbanwee ọnọdụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị ruo mgbe ebighi ebi, na-ewebata ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye na ụwa nke na-asọgharị aka ekpe ma ọ bụ aka nri iji kwekọọ na ndị nwere ike ịnwe mmekọrịta ma ọ bụ ndị ọzọ dị mkpa.
Ma ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-achọ ihe dị iche iche, ọ bụ ugbu a ka emeziri ka ọ dịkwuo mkpa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Tinder nwere ike bụrụ ihe kacha mma na obere obodo ebe enweghị ọtụtụ mmadụ na ngwa niche ndị ọzọ mana maa ama na ndị mmadụ na-achọ ndokwa ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ọ malitere dị ka ngwa kpamkpam n'efu, enwere ugbu a nhọrọ enweghị ego na akwụ ụgwọ nke na-enye ndị ọrụ ohere "dị ka" ndị mmadụ (ụdị okwu otuto ndị ọzọ na-ekwu na ọ na-eme ka i nwee ohere maka egwuregwu), jiri njirimara paspọtụ iji hụ onye si n'ebe ndị ọzọ, ma hụ onye masịrị gị tupu ị banye n'akụkụ ha. Tinder Gold na-enye ndị ọrụ ihe ahụ niile na ihe ọzọ maka ihe dịka $ 15 kwa ọnwa, ebe Tinder Platinum na-enye ndị ọrụ nhọrọ ndị ahụ yana ikike izipu mmadụ tupu ha adaba maka ihe dịka $ 10 kwa ọnwa maka ọnwa isii.
Nbudata a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ngwa nwere ike iyi ka a nnukwu nkwa na-eche a obere bit ma ọ bụrụ na ị bụghị n'aka na nke na-agbalị mbụ, ebe ha niile nwere nnọọ iche vibes. Mgbabere bụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịmatakwu ihe gbasara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ọ na-enye gị ozi ndị ọzọ gbasara ụbọchị nwere ike ịgba ume ka gị na gị kparịta ụka. Raya dị mma ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịhụ onye a ma ama ma ọ bụ chọọ ịkpakọrịta na ndị ọzọ na-echepụta ihe, mana ọ nwere ike isiri gị ike ịkpọbata ya.
Ọfụma dị mma ma ọ bụrụ na ị na-enwe olileanya ịga n'ihu ọtụtụ ụbọchị mbụ. Ngwa ahụ anaghị agwa gị ọtụtụ ihe gbasara ndị mmadụ, mana ọ na-eme ka ọ dịrị ya mfe swipe na-adịghị agwụ agwụ wee malite ịkparịta ụka. Chee echiche banyere ya dị ka izute mmadụ na mmanya na-enweghị uche. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịlụ nwanyị ma chọọ ngwa naanị maka nke a, Ọ bụ nzọ gị kacha mma. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ọ bụrụ ihe efu, Tinder bụ agadi kwesịrị ntụkwasị obi maka ihe kpatara ya.
Olee otu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwa ọdịnala na-arụ ọrụ?
Appsfọdụ ngwa chọrọ ka ndị ọzọ swipe ziri ezi ma ọ bụrụ na ha nwere mmasị wee nye gị ohere ijikọ. Ndị ọzọ na-ahapụ otu onye ka ọ ziga ozi, mgbe ahụ onye natara ya nwere ike ikpebi ma ha chọrọ ịzaghachi ma ọ bụ na ha achọghị. A ole na ole nke ngwa ọdịnala na-enye ọtụtụ ihe ọmụma, gụnyere mahadum, elu, na ọbụna ma ndị mmadụ chọrọ ụmụaka ma ọ bụ na ha achọghị, ebe ndị ọzọ ga-egosi gị naanị ndị nwere ike ịnwe mmekọrịta na-enweghị ọtụtụ ozi.
Enwere Nhọrọ Nhọrọ efu na nke akwụ ụgwọ maka ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị?
Ọtụtụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwa bụ free, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ nwere a free nhọrọ nakwa dị ka a adịchaghị, ugwo nhọrọ. Nhọrọ a na-enye n'efu na-enyekarị ndị mmadụ ohere ịmịgharị, ebe ịkwụ ụgwọ na-enye ndị mmadụ ohere ịpụkarị, na-edobe nzacha na-egosi naanị ịdị elu, okpukperechi, ma ọ bụ mmekọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, dịka ọmụmaatụ. Maka ọtụtụ ngwa, ọ dị oke mfe ibudata ha wee jiri nsụgharị efu ọ gwụla ma ị na-achọ ihe dị oke mkpa. Appsfọdụ ngwa, dị ka Raya, chọrọ ndị ọrụ niile ka ha kwụọ obere ego kwa ọnwa. Oge ụfọdụ, ego a na-akwụ pere mpe ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ ọnwa ole na ole ma ọ bụ karịa.
Ego Ole Ka Datinglọ Mmekọahụ Na-efu?